सर्वोच्चलाई केपी ओलीको प्रश्न– देउवा प्रधानमन्त्री भए भने एमाले सत्तापक्ष हुन्छ कि प्रतिपक्ष ? - Janadesh Khabar
सर्वोच्चलाई केपी ओलीको प्रश्न– देउवा प्रधानमन्त्री भए भने एमाले सत्तापक्ष हुन्छ कि प्रतिपक्ष ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न रिट निवेदनको मागअनुसार आदेश दिएमा एमालेको अवस्था के हुने भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
एमालेका २३ सांसदले पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त विषयलाई लिएर ओलीले अदालतलाई प्रश्न गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले सोधेको कारण देखाउ आदेशको जवाफमा ओलीले उल्टै सोधेका छन्, -विपक्षीको माग पूरा भयो भने एमाले सत्तापक्ष हुने वा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने ?
संविधानले प्रमुख विपक्षी दलको नेताको परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै ओलीले अगाडि सोधेका छन्- नेपालको संविधानले प्रमुख प्रतिपक्षलाई शासन सञ्चालनमा अनिवार्य गरेको छ र प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई विभिन्न संवैधानिक भूमिका प्रदान गरिएको छ ।
कथंकदाचित रिट निवेदकहरूले माग गरे बमोजिम श्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने रिट निवेदक मध्येका नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य कुन दलको हुनुहुन्छ ?
मैले नेतृत्व गरेको नेकपा (एमाले) सत्तापक्ष हुन्छ कि प्रतिपक्ष ? किनभने श्री शेरबहादुर देउवा त नेकपा (एमाले)कै प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको अवस्था हुनेछ । एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन सक्दैन ।
एमालेका सांसदको समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्री बनेमा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीभित्र विवाद आउने ओलीको भनाइ छ । उनले एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहनुपर्ने अवस्था हुन नसक्ने बताएका छन् ।
३ असार २०७८, बिहीवार १३:२६ बजे प्रकाशित
संसद पुनस्थापना भए पनि वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था छैन : प्रधानमन्त्री ओली